Faucet an-dakozia tokana miaraka amina chrome chino
Faucets ao an-dakozia, mpameno vilany, Faucet fandroana | WOWOW
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucet ao an-dakozia tokana miaraka amina Chrome
WOWOW Faucet ao an-dakozia tokana miaraka amina Chrome
Ity paompy an-dakozia ity dia mety amin'ny fampiharana ara-barotra sy trano.
Ity kobom-bolo amin'ny kalitao ambany ity dia manana fiantsoana aestetika avo lenta.
Ny kitapo finday dia afaka manome fiarovana sy haingo.
Torolàlana fametrahana 2310700C
Ny mpangaroan'ny lakozia vita amin'ny chrome 2310700C
Ny kaomporo mixer amin'ny lakozia dia manangona fotsiny ny rano mafana sy mangatsiaka. Azonao atao ny mifangaro tsara ny renirano roa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Mba hanomezana anao ny hafanan'ny rano ilainao. Ny fampifangaroana ny mari-pana dia azo atao tanana tokana amin'ny chrome mixer tap chrome WOWOW. Mihetsika milamina fotsiny ilay boka ary azo fehezina mora foana ny rano. Samy ny mari-pana sy ny tsindry amin'ny rano ihany. Ho hitanao avy hatrany fa ity fitaovana ity dia vita amina fitaovana avo lenta. Rehefa mandeha tsara izy io, ary tsy manana lamosina, dia fantatrao fa azo antoka ny fiaretana maharitra.
Afaka mampiasa fiasa telo rano ianao raha mifangaro ny mari-pana amin'ny rano. Amin'ny spout azonao atao ny misafidy mode flow, mode spray, ary fomba aqua-blade. Ny fomba aqua-blade dia manondraka setroka mahery vaika, izay manala ny loto rehetra avy ao anaty vilany sy ny loviao avy hatrany. Ity fomba aqua-blade ity dia fomba iray tsy manam-paharoa izay tsy hahitanao ny takelon'ny mixer an-dakozia. Ny fomba famafazana dia fomba mahomby handroahana ireo takelaka tsy misy pentimpentina, ary ny fomba fanao matetika dia safidy tsara amin'ny vilany misy rano ao anaty rano. Ny maodra rehetra amin'ny rano dia manolotra fampidirana rano mba hitrandrahana ny fanjifanao rano. Amin'izany fomba izany dia hanolotra ny anjaranao ianao mba hamonjy amin'ny harena voajanahary tsy dia fahita. Ho fanampin'izany, ho voamarikao amin'ny volanao ny rano, satria afaka mamonjy hatramin'ny 50% amin'ny fanjonoana rano miaraka amin'ny chrome mixer chrome WOWOW ianao.
Karazan-tsiro mifangaro kalitao avo lenta
WOWOW dia natokana hanolotra faucet avo lenta amin'ny mpanjifany. Izany no antony mahatonga ny WOWOW dia mampiasa fitaovana mihoatra ny fitsipi-pahaizana rehetra momba ny indostria, eny fa na dia ireo A-brand ihany aza. Amin'ny WOWOW dia mino isika miaraka amin'ny kalitao avo lenta dia afaka manova ny tsena. Raha vao nisy olona nahita fanandramana WOWOW dia ho mpanjifa amin'ny fiainana izy. Izany no antony ahitanay ny fitomboan'ny mpanjifanay isan'andro. Azonao atao ny mahita ny hatsarantsika amin'ny fangatahanay maoderina, toy ny aoperate Neoperl ary ny famaranana ny faucets miaraka amin'ny paikady electroplating ambony indrindra. Izahay dia manome antoka fa azonao atao ny mampiasa rindrina vita amin'ny lakozia avo lenta amin'ny fotoana lava.
Izany no antony mahatonga ny WOWOW tsy matahotra izahay hanolotra fe-potoana warranty 5 taona amin'ny chrome mixer tap chrome. Ny ankamaroan'ny marika faucet dia manolotra fe-potoana tokana 1 taona lasa. Mihatra amin'ny marika A-marika ihany koa izany. Amin'ny maha-mpitazona lamba ao an-dakozia azy matetika amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 taona, ao amin'ny WOWOW izahay dia matoky ny hanome anao mandritra ny 5 taona farany. Tena tsy mahazatra raha toa ny kaonty mpangaro ny lakozia tokony hosoloina ao anatin'ny 5 taona aorian'ny fametrahana azy. Ary ho hitanay fa tsy azo ekena koa, indrindra amin'ny fomba fijerinay mpanjifa. Nahoana ianao no tokony hiatrika ny vokatr'izany? Izany no antony hisoloanay ny kaomina mixer amin'ny lakozia raha toa ka tsy tanterahina tsara intsony ao anatin'ny 5 taona. Tsy misy olana!
Tsoahy ny fangaro mixer
Ny fampiasa an-javam-basy mifangaro ny chrome mifangaro vita amin'ny lakozia dia ny fantsom-panavaozana mampisongadina azy. Azonao atao ny misintona moramora ny lohan'ny spray amin'ity chrome misy mixer cypte ity ary hisy hose rano lava. Amin'ity hosotra rano ity dia mety ho tonga any amin'ny toerana rehetra ianao na manodidina ny fandroana an-dakozia.
Ity hosary rano ity dia vita amin'ny gel silica mora ampiasaina, noho izany dia azonao antoka ny fandidiana mora rehefa misintona moramora izy. Ary rehefa avy mampiasa izany, dia hisintona ho azy io avy hatrany satria ny ball ravity izay napetraka tsy an-kijanona ao anaty lakozia fandroana. Amin'izany fomba izany dia tsy mila miahiahy momba ny fitafy ianao, mitete na manala. Ity chorera vita amin'ny lakozia vita amin'ny lakozia ity dia maharitra mandritra ny taona maro. Izany no antoka iray tsy sahy manolotra anao.
Mampiasa fivarotam-bokatra vita amin'ny chrome mixer amin'ny varotra
Noho ny kalitao avoakanay miaraka amina chrome mixer amin'ny lakozia, dia io fampiasa amin'ny lakozia io no matetika ampiasaina amin'ny toerana fivarotana. Ao amin'ny trano fisakafoanana sy ny bar no zava-dehibe indrindra amin'ny fampitaovana an-dakozia. Raha hianjera ny kaomina mixer ao amin'ny lakozia, dia mety hanimba ilay orinasa io. Noho izany, ny toeram-pivarotana toy ny trano fisakafoanana dia tsy miankina afa-tsy ny kalitao avo indrindra. Noho izany antony izany, ao amin'ny WOWOW isika dia mahita fa mahafa-po ny mahita fa trano fisakafoanana nternational maro no nampihatra kofehy mixer amin'ny lakozia. Ny fanamafisana ny fampanantenana momba ny kalitao atolotray.
Mahatsapa chrome mifangaro chrome
Ankoatra ny kalitao sy ny fampisehoana azy, na an'ny trano fisakafoanana na trano fisakafoanana, ny chrome mixer tapon-dakozia dia manolotra fiantsoana an-tsehatra avo lenta. Tamin'ny voalohany, noho ny famolavolana arc avoakany izay mitambatra ny fomba amin'ny fiasa, satria mbola afaka miditra mora foana amin'ny lakozia ao an-dakozia ianao. Ny mpamorona ny WOWOW dia natokana hanolotra drafitra sahy izay mety amin'ny endriny misy lakozia famolavolana. Izany no antony mahatonga ny lakozia mifangaro kiraro WOWOW chrome dia azo antoka fa tsy toy ny kaomina hafa mifangaro. Ny fototra lakozia mifangaro amin'ny kirihitra dia tery amin'ny farany ambany sy midadasika eo ambany. Ny tarehin'ny fehikibo mampiavaka ity fantsom-bolavam-bolo ity dia kanto kokoa ary manome lamandy ny lakozia anao. Ary rehefa mamadika ny fangaro mixeur, dia tsy ho very tanteraka ny endrika kanto.
Amin'ny lafiny rehetra, ny chrome mixer tap chrome of WOWOW dia manome anao ny lanja lehibe indrindra amin'ny vola azonao amin'ny tsena. Ary ambonin'izany rehetra izany dia mahazo singa fanaka kiraro marevaka sy kanto ianao izay hisarika ny saina rehetra any an-dakozia, na an-trano na fivarotana izany. Ny chrome mpangaro mixer amin'ny lakozia dia miaraka amina toky 5 taona ary antoka iray ao anatin'ny 90 andro. Raha tsy resy lahatra ianao amin'ny chrome mixer tap chrome, dia averina atao aminay izany raha tsy misy fanontaniana apetraka. Hahazo fiverenanao feno avy hatrany ianao. Matoky ny vokatrao izahay ary matoky fa ho tianao ny chrome mixer tap chrome.
Ny tombony amin'ny chrome mixer tap chrome amin'ny fomba fohy
· Fampifangaroana tsara
· Fomba telo telo
· Endri-manamboatra rano
· Famolavolana mahafinaritra sy kanto
SKU: 2310700C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: Tendrombohitra deck, Drafitra Sink Kitchen, Spout Swivel
21.65 X 11.02 X 2.76 santimetatra
Faucet an-dakozia / fantsom-palatra an-dakozia misy famafazana spray
Lavaka tokana & lavaka 3; Deck-Mount
Arc avo / Gooseneck
1-Hole na 3-Hole misy rakotra takelaka vita amin'ny takelaka 8 mirefy
Fomba telo: stream / spray / fiatoana
Ankavia na havanana
Paompy mixer / Fomba fanaraha-maso rano telo
1x WOWOW Faucet ao an-dakozia (Hositra rano mafana sy mangatsiaka 50cm, haavo PEX Tube miakatra 1.5m), kojakoja: fehin-kibo, Gasket, Voanjo, 1x Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa, 1x lanja, takelaka boribory 1 x 8 santimetatra